XOG: Wacdarihii N'Golo Kante, Saamayntii Roberto Firmino Iyo Shan Waxyaabood Oo Laga Bartay Finalkii UEFA Super Cup Ee Ay Liverpool Guusha Ka Gaadhay Chelsea. - Gool24.Net
XOG: Wacdarihii N’Golo Kante, Saamayntii Roberto Firmino Iyo Shan Waxyaabood Oo Laga Bartay Finalkii UEFA Super Cup Ee Ay Liverpool Guusha Ka Gaadhay Chelsea.
Kooxda Liverpool ayaa xalay markii afraad loo caleemo saaray koobka UEFA Super Cup kadib markii ay guul rekoodhayaal 5-4 ah ay ku garaacday kooxda ay Premier League ka wada dhisan yihiin ee Chelsea.
Chelsea iyo Liverpool ayaa 120 daqiiqo ku kala bixi waayay waxayna taasi keentay in rekoodhayaal lagu kala saaray. Dhamaan shantii ciyaartoy ee Liverpool u tuuray rekoodhayaasha ayaa shabaqa Kepa wada gaadhay laakiin Abraham ayaa murugo wayn kala baxay istanbul.
Chelsea ayaa muujisay horumar wayn iyada oo isbadalkii uu Frank Lampard ku sameeyay shaxdii uu ceebta Man United kala kulmay ay si wayn u shaqaysay waana wanaaga kaliya ee uu Istanbul kala soo laabanayo.
Liverpool waxay noqotay kooxda labaad ee ugu guulaha badan koobka UEFA Super Cup iyada oo barbaraysay rekoodhkii Real Madrid oo iyaduna koobkan afar jeer haysatay laakiin kooxaha kaalinta kowaad kuwada jira ee Barcelona iyo AC Milan ayaa min shan jeer UEFA Super Cup ku soo guulaystay.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa shan waxyaabood oo laga bartay kulankii finalkii UEFA Super Cup ee ay Liverpool koobka UEFA Super Cup kaga qaaday Chelsea.
5- Goolhaye Kepa Oo Si Layaableh Isku Muujiyay.
Goolhayaha reer Spain ee Kepa ayaa oo xili ciyaareedkii la soo dhaafay siyaabo aan fiicnayn ku qabsaday indhaha caalamka ayaa ugu danbayn muujiyay sababtii ay Chelsea lacagta badan uga soo bixisay.
Kepa ayaa gool badbaadino layaableh ka sameeyay kulankii finalkii UEFA Super Cup isaga oo Mohamed Salah laba jeer ka joojiyay fursado uu laba gool ku dhalin lahaa halka uu sidoo kale Van Dijk u diiday in uu shabaqa gaadho.
Kepa ayaa door muhiim ah ka ciyaaray in 120 daqiiqo ayna Chelsea wax guuldaro ah kala kulmin kooxda Liverpool inkasta oo Jurgen Klopp uu soo xushay shax ay saluug badan ka muujiyeen taageerayaasha kooxdiisa Reds.
Haddii goolhayaasha ugu fiican ee Premier League ee heerka caalami ah lagu tilmaamayay David De Gea, Alisson iyo Ederson waxa uu Kepa muujiyay in uu meel la joogsan karo goolhayaashan faciisa ah.
4- Murankii Gacanta Ahaa Ee Andreas Christensen Uu Mane Goolka Kaga Joojiyay.
Isbadalada dhinaca sharciga ah ee la sameeyay ayaa noqonaya kuwo wali jaho wareer ku abuuraya taageerayaasha kubbada cagta waxaana bilawgii qaybtii hore ee kulankii Liverpool iyo Chelsea jiray dood badan.
Sadio Mane ayaa isku dayay in uu kubbad laba lugoodley ah ku bartilmaameedsado goolka Chelsea laakiin difaaca dhexe ee Andreas Christensen ayaa si cadaan ah loo arkayay iyada oo kubbadu ay gacanta kag dhacday.
Liverpool ayaa rekoodhe dalbatay laakiin waxa uu hadalkoodu ku dhacay dhego daboolan laakiin markii la qimeyay waxaa la ogaaday in garsoorihii dumarka ahayd ee kulankan haysay ay qaadatay go’aankii ugu saxsanaa.
Sidaa daraaded, Andreas Christensen ayaan wax ciqaab ah ku marin kubbadii uu gacanta ku taabtay ee uu Mane kaga joojiyay fursada uu goolka ku raadinayay.
Riix 2,3 si aad xogta oo dhan u akhrisato.